Vaovao - Asiaprint dia mitazona ilay hevitra miaraka amin'ny “Sevice important more”
Androany no nanondrananay ireo milina fanodinana hafanana roa tany Vietnam. Ny baiko milina famindrana hafanana dia feno amin'ity roa volana ity ary manemotra ny sasany amin'ireo kaomandy ary miteraka tsy fahafaham-po ho an'ny mpanjifa. Ho an'ny kaomandinao manaraka, azafady manaova entana haingana hanararaotra ny fotoana ilainao!
Tsy mihoampampana ny filazana fa ny mpiasanay dia niasa 16 ora isan'andro hatramin'ny volana feb amin'ity taona ity mba hanatanterahana ny fotoana na dia maro aza ny hetsika mifanohitra. Soa ihany fa mahazo ny fanohanan'ny mpanjifanay izahay ary mahatakatra. Misaotra izany izahay. Ary ankoatr'izay, ny mpiasanay rehetra dia hanana fialantsasatra aorian'io fotoana be atao io.
Ny 1-ME hatramin'ny 5-MEAY 2021 dia ny Andron'ny Asa, hanohy ny asa isika manomboka amin'ny 6-Mey. Na izany aza, ny mpiasa manamboatra milina dia tsy hiasa afa-tsy 2 andro.
Manantena aho fa handefa milina ara-potoana amin'ny volana manaraka.